Dubartootni Oromoo Lafee Dugdaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ti. – Kichuu
HomeWomenOromoDubartootni Oromoo Lafee Dugdaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ti.
Ibsa Ejjennoo Damee Dubartootaa fi Daa’immanii (DDD) Adda Bilisummaa Oromoo (ABO)
Kallacha Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ta’e dhaabni hangafni Addi Bilisummaa Oromoo (ABOn) Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa Ummata Oromoof, akkasumas mirga saboota cunqurfamoof falmuuf baroota dheeraa qabsoo hidhannoo haga wareegama lubbuutti taasisuun isaa beekamaa dha. Qabsoo ABOn taasisaa ture keessatti shamarran Oromoo qaaman hirmaachuun loltee lolchiistee wareega lubbuu kaffaluun gaheen bahatte olaanaa dha.
Kana malees abbaa warraa ofiif hamilee tahaa qabsoo kanatti hirmaachisuun ilmaan qofaa guddisaa, dhala ofii qabsoo kanaaf gumaachuun wareegamni yoo irra gahellee dhiigni dhalakoo Bilisummaa biqilcha jechuun cichoominaan gatiin baasan tilmaama hin qabu.
Ummatni Oromoo bal’aa fi Qeerroon Bilisummaa Oromoos qabsoo dhaabni isaa ABOn taasisu keessatti harka qullaa diina dura dhaabbatee wareegamni baase hagana jedhamee kan hin tilmaamamne yoo ta’u, qabsoo isaatiinis siyaasni biyyattii gara wayyaa qabutti dhufuun waamichi qabsoo karaa nagaa ABOf taasifame.
Dhaabichis waamicha qaama biyya bulchu irraa isa dhaqqabeen walta’insa irra gahamee qabsoo karaa nagaatti amanuun Fulbaana 15/2018 gara biyyaatti deebi’e. Guyyaa kanas sabaa fi Sab-lammoota biyyattii dabalatee ummata Oromoo miliyoonaan lakkaawwamuun simannaa ho’aan taasifameefii qabsoo karaa nagaa itti fufe.
Haa ta’u malee walta’iinsi qaama biyya bulchu waliin taasifame gama mootummichaatiin hojiitti hiikamuu hanqatee, hoggana dhaabichaa irraa hanga miseensaatti, deggartoota dhaabichaa fi ummata Oromoo bal’aa irratti ajjechaa fi hidhaa jumlaan adeemsifame.
Hawwanii fi shamarran Oromoo umriin osoo hin daangessin hanga daa’ima kichuutti hidhattoota qaama biyya bulchuun gudeedamuutu muudate. Daa’imman umrii malee hidhaatti dararamuu, haati ulfaan jirtu gudeedamuun ilmoon garaa keessatti miidhamuu, ulfaan ajjeefamuu fi qoorqalbiin daa’immanii gocha qaama mootummichaan taasifamuun tuqamuun haalaan yaaddessaa ta’e. Dhaabni cichoomaan ABO’s danqaalee isa mudatan mara damdamatee waliigaltee mootummaa waliin qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf taasise milkeessuuf dhiibbaa taasisus gama mootummichaan danqaaleen isa mudatan daran jabaatan.
Hogganootni olaanoon dhaabichaa hidhamuu, waajjirri muummee dhaabichaa Gullallee cufamuu fi Hayyuu Dureen hojii idilee isaanii irraa manatti ugguramuun sochiiwwan dhaabichaatti gufuu guddaa uumeera.
Baroota dheeraaf filannoon biyyattii keessatti adeemsifamu haqa irraa kan fagaate ta’us, kan bara kanaa ammoo adda kan isa taasisu mootummaan bara aangoo isaa dheereffachuuf jecha dhibee COVID-19 sababeeffachuun guyyaa filannoo achi dheeressee jira. Mootimmichis yeroon aangoo isaa waan irra dabreef seera qabeessummaa hin qabaatu.
Sababa kana irraa kan ka’e ABOn Mootummaa Ce’umsa Biyyoolessa Oromiyaa (MCBO) labsuuf dirqamee waamichas taasisee jira. Nutis Dameen Dubartootaa fi Daa’immanii (DDD) ABO labsii mootummaa ce’umsa biyyoolessaa oromiyaa dhaabni keenya labse deggaruun waamicha kanaaf owwaachuuf Onkoloolessa 20-2020 marii taasifneen ibsa ejjennoo qabxiilee 8 of jalaa qabu akka armaan gadiitti baafannee jirra.
1. Akka DDD ABOtti labsa mootummaa ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa dhaabni keenya labse ni deggerra, waamicha kanaafis ni owwaanna.
2. Akka sirna Gadaatti Dubartiin Oromoo haadha siiqqee taate siiqqee ishee qabattee waraanaa gidduu yoo seente lolli sun ni dhaabbata waan ta’eef siiqqee keenya qabannee ba’uun mootummaa ce’uumsaa biyyoolessaa Oromiyaa cinaa dhaabbachuun nagaa fi tasgabbii biyya keenyaa ni tiksina.
3. Hawwanii fi Shamarran Oromoo maraaf sarbamiinsi mirga namoomaa fi gudeeddaan safuu cabse akka isaan irraa dhaabbatuuf waamicha kanaaf akka owwaatan dhaamnaaf.
4. Caayaalee fi waldaaleen dubartootaa Oromoo biyya keessaa fi ala jiran waamicha mootummaa cehumsaa biyyoolessa Oromiyaa ABO’n taasise akka tumsan hubachiisna.
5. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo fi dhaabileen falma mirga namoomaa marti hundeffama motummaa cehumsa biyyoolessa Oromiyaa kana akka deeggaran ni gaafanna.
6. Tarkaanfii mootummaan maatirratti fudhatuun wal qabatee miidhaa xiinsammuu daa’immanii irratti qaqqabu hambisuuf gama danda’amu maraan niqabsoofna.
7. Hidhamtootni siyaasaa fi hayyotni Oromoo sababa Oromummaa isaaniif hidhaman hiikamanii waamicha mootummaa cehumsaa biyyoolessa Oromiyaa dhaabni ABO adda durumman taasisetti akka hirmaataniif dhiibbaa ni goona.
8. Labsa Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessaa Oromiyaa (MCBO) ilaalchisee qajeelfamoota dhaabni keenya baasu ni hordofna, ni tumsina.
DDD ABO Finfinnee
#OGN Oduu caccabsa Michuu ABIY President Eritrea Isayas Afuwarki himanni irratti baname.
#Buraayyu: Bulchinsa Magaala Buraayyuu Waajira Ganda Gafarssa